Nhau - Maitiro ekuwana kuvimba kwevatengi mukutanga kubatana
Ungawana sei kuvimba kwevatengi mukutanga kubatana
Nezve iyo indasitiri muchina unotenga kubva Kunze vatengi, ndezvipi zvinhu zviri akakosha mapoinzi ekutengeserana?
Iye zvino tinoda kukurukura iyi nyaya kubva kune imwe nyaya yatakasangana nayo nguva pfupi yadarika.
Background: Cali anobva kune mumwe mugadziri muLos Angeles, USA, iyo kambani inoda kutenga White chando fir inonhuhwirira zvishongo kutenderera bhodhoro yekunyorera muchina we25ml mupurasitiki bhodhoro ine 6 matanda matanda. Tingaita sei pakadai?
1.Kuziva matambudziko akatarisana nemutengi: Havana kumbobvira vatenga kubva kuChina zvisati zvaitika. Kutenga kwavo kwekare kwakaitwa kuburikidza neEbay; Saka havana ruzivo rwakakwana mune imwe nyaya inoenderana mukutengesa kwenyika dzese.
Semuenzaniso, ivo vanoda muchina nekuchimbidza, asi havana kufunga nezverudzi urwu rwemaindasitiri muchina wakasarudzika zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi, zvinoda nguva yakawanda. Asi ivo vakangoverenga zuva rekutumira. Kune zvimwe zvakare zvimwe zvinhu zvinokanganisa kuendesa tine, senge kubhadharwa kweTT, havana ruzivo kuti ingasvika mazuva mangani muaccount yedu. Saka isu tinofanirwa kufunga kuti tipe akanyanya kuraira maitiro ekuti vawane kubhadhara kwavo sekutanga sezvazvinogona kuti titange kugadzirwa nekukurumidza.
Nekutarisa kumatambudziko ari pamusoro, isu tinofanirwa kupa hunyanzvi mhinduro kune mutengi nekukurumidza kuchengetedza nguva.
3.Kupa mutengi chikumbiro chakakodzera. mainjiniya edu anoshandisa CAD kugadzira dhizaini dhizaini. Inosanganisira kudyisa turntable, kuendesa, inkjet coder, kutenderera bhodhoro kunyora muchina (yakazara denderedzwa), yepamusoro pevhu chitaridzi michina, mativi akaunganidzwa tafura nezvimwe, nehukuru uye kumisikidzwa. Zvisinei nemutengi inyanzvi mutengi kana kwete, isu tinogadzira zvirongwa uye neruzivo pamberi.
4. Ongorora matambudziko aripo akaitika: Client's bhodhoro nzvimbo yegiravhiti haina kuenzana, maitiro ekuona chokwadi: 1) kugadzikana kwemuchina kunyora; 2) iwo maviri magumo echiratidzo akaenzana; 3) iyo spidhi inosvika mabhodhoro e120 paminiti sezvinodiwa nemutengi Patinokurukura nyaya iyi tisati tasimbisa odha yacho, takakurudzira mutengi kuti atumire bhodhoro uye anyore masampuli nekukurumidza. Patakawana masampuli (mabhodhoro, zvinyorwa zvemazita, nezvimwewo). Injiniya wedu akachinjisa chidimbu dhizaini dhizaini, chinja kuita nyeredzi vhiri mhando labeler kunatsiridza iyo yekumhanyisa kumhanyisa kusvika kumabhodhoro e120 paminiti.
5.Kurudzira kushandisa nendege kuti uve nechokwadi chekuti muchina unosvika nenguva uchifunga chete nemazuva gumi asara ekugadzirwa kwenguva. Mune ino mamiriro, isu takaongorora matanho ese nedhipatimendi rekugadzira kuti zvigadzirwa zvisati zvarongedzwa pamberi uye dhipatimendi redu rekugadzira rinoshanda nguva yekuwedzera kuti upedze muchina munguva pfupi kwazvo kuti usangane nezvinodiwa zvevatengi.
Neyedu yekudyidzana kuyedza, isu takabudirira kuzadza iyo yekuchina muchina mutsara odha neyekutanga-nguva mutengi zvinobudirira.
Post nguva: Dec-15-2019